CAAFIMAADKA – Sida 2
Ha dhayalsanin farriintan mihiimka ah
Farriin mihiim ah! By: Siciid Ismaaciil Maxamed (Ina Ismaaciil Somali Airlines) Haddii aad deggen tahay ama aad ku nooshahay dalka Sweden, oo aad sharci leedahay. Waxa ay Hay´adda arrimaha caafimaadka u qaabilsan dalka Sweden. The National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) The National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) is a government agency …
Riwaayad wacyi-gelin ah oo ku saabsan ka hortagga Shubanka (Sooraan iyo Jawaan)
Tukaano sun iibinaya
Tukaano sun iibinaya Tan iyo markii burburku dhacay waxa baa’bay oo faraha ka baxay nidaamkii yaraa ee jiray taas oo keentay in kantaroolkii wax walba lumaan oo la waayo cid iska xilsaarta waxyaabahaas dhibtu soo gaadheen. Waxyaabaha dhibtu soo gaadhay waxa ka mid ah adeegii caafimaadka waxa la waayey shaqaalihii aqoonta caafimaad lahaa sida dhakhaatiirta, …
Dhiiggu waa dareere jidhka u ah gaadiid u kala goosha waxaana lagu sameeyaa dhuuxa lafaha waaweyn ee jidhka. Qofka miisaankiisu yahay 70 kg waxa jidhkiisa ku jira 5-6 litir oo dhiig ah
Xaaladaha Dhakhtarada Dimirka ee Somaliland
Maalintii sabtida ee ay bishu ahayd 12 November waxa aan ka qaybgalay kulan lacag loogu ururinayay dadka la itaalka daran xanuunada maanka ee dalkii hooyo ku nool. Waxa kulanka loo qabtay urur samafal oo hawshan ku mashquulsan oo fadhigiisu yahay magaalada Cardiff ee boqortooyada Biritin.
KANSARKA Unugyada jidhku waxa mar walba ku dhaca isbadel kuwaas oo ah in unugyadii hore lagu badalo kuwo cusub, waxaanay ku dhacdaa habka loo yaqaano qeybsanka unugga. Waxaana jira hab lagu kontroolo marka uu bilaabmayo ama dhamaanayo qeybsanka unugu si aanay u dhicin wax khalada ama aanay unugu iskaga samynin unugyo cusub oo dheeraad ah …
Dhibaatooyinka qaadka Qaadku waxa uu yahay shay dadka geeska Afrika ay aad u isticmaalaan gaar ahaan dadka soomalidu waxaanu leeyahay taariikh dheer sida la sheegay waxa uu ka soo bilaabmay dalka Itoobiya oo uu markii danbe uga sii gudbay Dalal badan oo ay ka mid yihiin Yamen, Soomaaliya, Kiiniya, Taansaaniya iyo meelo kale.